Kulan Maamuus ah oo loo sameeyay hawl wadeenada iyo ardayda Jaamacadda Muqdisho |
Kulan Maamuus ah oo loo sameeyay hawl wadeenada iyo ardayda Jaamacadda Muqdisho
Kulan mahad celin ah oo loo sameeyay hawl wadeenada iyo ardayda Jaamacadda Muqdisho. kulankan oo ujeedkiisu ahaa mahad celin munaasabadda todobaadka dhaqanka Jaamacadda Muqdisho loogu mahad celinayay sidii wanaagsaneyd ee ay u agaasimeen ardaydii cusbeed ee sanad waxbarashadeedka 2017-2018 ee Jaamacadda Muqdisho.
waxaa kalimado munaasab ah kasoo jeediyay masuuliyiinta Jaamacadda Muqdihso, ugu horayn waxaa kahadlay guddoomiyaha guddiga qabashada todobaadka dhaqanka ustaad Xasan Sheekh Xasan (Baaxasan) ayaa ku tilmaamay in hawl wadeenadan ay muujiyeen karti dheeri ah iyo dadaal xoogan ayna kasoo dhalaaleen hawshii loo igmaday.
Madaxa xafiiska ardayda Jaamacadda Muqdisho ustaad Muuse Axmed Cabdalla ayaa yiri:-
“waxaan ku faraxsanahay guddiga najixinta hawsha laqabtay iyo sida guusha leh ee ay ku dhamaatay dhamaanteena aan ku faraxsanahay”
Dr. Shariif Cusmaan oo kamid ah masuuliyiinta Jaamacadda Muqdisho ayaa isna yiri:
“waxaa tihiin dad nadiif ah oo heegan u ah markasta inaad bulshadiina wax wayn u qabataan.”
“Jaamacadda Muqdishana waxay idin aqoonsatay inaad tihiin dad wax wayn u qabtay shacbigooda markastana laxusuusan doono” ayuu kusoo afmeeray qudbadiisii dhinacyo badan taabanaysay.
Fardawsa Cali faarax oo kamid ah masuuliyiinta Jaamacadda ayaa tiri:
“waxaan ku faraxsanahay hawsha baaxada lahayd iyo guusha aan gaarnay waxayna xusuusin kadhigtay (Rooma maalin madhismin), dhismaha dadkeena iyo dalkeena innaga ayuu nasugayaa”
waxayna u mahad celisay hawl wadeenada Jaamacadda iyo hawshaan qiimaha badan sida ay ugu soo dhalaaleen.
ugu dambayn guddoomiyaha Jaamacadda Muqdisho Dr. Ibraahim Maxamed Mursal Cali ayaa hadalkiisa ku bilaabay:
“sharaf wayn bay inoo tahay inaan idinkala soo qayb galo munaasabadan qiimaha badan ee aan ku maamuuseyno hawl wadeenkii xaqiijiyay hawshii loo igmaday.”
“Jaamacadda furitaankeedii baa wax layaab leh ahaa laakiin Jaamacadda Muqdisho waxay shacbiga Soomaaliyeed u abuurtay rajo aad ubalaaran in jaamacado lagu dhiiradana waxaa hooyo u ah Jaamacadda Muqdisho”
“Habeen iyo maalin waxaa nasoo gaaraya tahniyado iyo hambalyo hawsha qiimaha leh ee aan u hayno shacbiga Soomaalieed.”
“10 sano kadib kulaabashada xaruntii waynayd ee Jaamacadda Muqdisho waxay inoo ahayd bilow rajo galinta ummadda Soomaaliyeed waxaana marag madoonta ah in shacbiga Soomaaliyeed ill gooni ah nagu fiirinayaan Jaamacadda Muqdisho”
wuxuu tusaale usoo qaatay gabay uu lahaa Prof. Dr. Cali sheekh Axmed Abuubakar guddoomiyihii hore ee Jaamacadda Muqdisho.
(Talaabada udheeree Hadaad tiigsan himilooyin
Taladana u badi Daa’in waa lagu tanaadaaye)
wuxuuna hadalkiisa kusoo gebagabeeyay faanoole fari kama qodna shacbiga Soomaaliyeedna weli wuu nasugayaa.